Madaxweynihii hore ee Peru oo laga cafiyay 25-sano oo xabsi ah - BBC News Somali
Madaxweynihii hore ee Peru oo laga cafiyay 25-sano oo xabsi ah
Madaxweynihii hore ee xabsiga ku jiray ee Peru, Alberto Fujimori ayaa waxaa cafiyay madaxweynaha hadda talada haya, Pedro Pablo Kuczynski.
Xafiiska Mr Kuczynski wuxuu qoraal ku sheegay in Fujimori oo 79-jir ah, la siidaayay ka dib markii ay xaalado caafimaad daro la soo derseen.
Fujimori - oo xukkunka dalka Peru hayay 1990 illaa 2000 - waxaa dhowaan loo qaaday cisbitaalka ka dib markii lagu arkay dhiiggiisa oo hooseeya iyo xannuuno dhanka caloosha ah.
Wuxuu ku jiray xabsi 25 sano ah oo dhowaan lagu xukumay, waxaana la sheegay in lagu helay xadgudub dhanka xuquuqda aadanaha ah iyo musuqmaasuq. Wuxuu weli yahay hoggaamiyaha lagu kala qeybsan yahay, dalka Peru.
Dadka qaar waxay ku taageeraan sidii uu ula dagaallamay mucaaradkii Maoist, laakiin kuwa isaga dhallaaceeya waxay ka hadlayaan in uu yahay "keligii taliye musuqa caadeystay".
Fujimori ayaa sanadihii la soo dhaafay si joogto ah loo geynayay cisbitaalka si looga daweeyo xannuuno.
Cafiska madaxweynaha wuxuu ku soo aadayaa maalmo ka dib markii taageerayaasha Fujimori ee baarlamaanka ka mid ah ay Mr Kuczynski ka caawiyeen in laga hortago cod kalsoonida loogala noqon lahaa.
Alberto Fujimori oo isbitaal loo qaaday
Dalabka ciidda oo halis ku haya wabiyada
Siyaasiyiinta mucaaradka waxay madaxweynaha ku eedeeyeen in taageerayaasha Fujimori uu u ballan qaaday in uu siideynayo si ay codkooda ugu taageeraan.
Mr Kuczynski ayaa beeniyay eedahaas.
Dembi sidee ah baa Fujimori lagu helay?
Sannadkii 2007, waxaa lagu xukumay lix sano oo xabsi ah oo uu ku muteystay laaluush iyo in awoodda uu si xun u isticmaalay.
Bartamihii 2009-kii, waxaa lagu xukumay 25 sano oo xabsi ah ka dib markii lagu helay in uu xuquuqda aadanaha ku xadgudbay intii uu hayay xilka madaxweynaha, sida in uu amray dil toogasho.
Maxaa arrintiisa weli loogu kala qeybsan yahay?
Wuxuu fuliyay barnaamij xagjirnimo ah oo ku saabsanaa isbedelka suuqa xorta ah, wuxuu yareeyay doorka dowladda ee dhammaan iswaafajinta dhaqaalaha.
Inkastoo middan ay dhibaato ku noqotay dadka caadiga ah ee Peru, haddana tallaabadaas waxay soo afjartay sicirbararkii ragaadiyay dalka, waxayna waddada u xaartay in dhaqaalaha dalka uu kor u koco 1990-maadkii.
Lahaanshaha sawirka MARIE HIPPENMEYER
Image caption Go'aan adkaantii Fujimori waxaa ka dhashay tallaabooyiin adag oo uu ka qaaday rabshadihii ay wadeen mucaaradkii midigta fog.
Fujimori sidoo kale wuxuu ka hortagay mucaaradka bidixda fog kuwaas oo 10 sano waday kocdoon ay ku dhinteen kumannaan qof. Balse wuxuu sheegay in weligii uusan fasixin "dagaal xun" oo ka dhan ahaa fallaagada.
Sannadkii 1992-dii, Fujimori wuxuu kala diray baarlamaankii iyo maxkamadihii dalka, isagoo garab ka helayay militariga, wuxuuna si qasab ah kula wareegay awooddii maamulka dalka.
Wuxuu ficilkaasi cudurdaar uga dhigay in golaha sharcidejinta iyo maxkamadaha ay xagaldaacinayeen laamaha amniga ee la dagaallamayay fallaagada.
Hoggaamiyayaashii mucaaradka waxay sheegeen in uu doonayay in uusan la kulmin isla xisaabtan dimuquraadiyadeed.
Dayaarad uu dab qabsaday
Muuqaal Fiidiyow: Dayaarad uu dab qabsaday